SAWIRRO: Ra’isul Wasaaraha Itoobiya oo Shan Qodob kala hadlay Madaxda & odayaasha Soomaalida & Oromada… | Nabadqaad.com
SAWIRRO: Ra’isul Wasaaraha Itoobiya oo Shan Qodob kala hadlay Madaxda & odayaasha Soomaalida & Oromada…
Ra’isul wasaaraha xukuumada Ethiopia Hailemariam Desalegn ayaa kulan khaasa xafiiskiisa kula qaatay Madaxweynayaasha DDSI iyo Oromada, Odayaasha iyo Ganacsatada kasoo kala jeeda labada kilil oo ay colaadu u dhexeyso.
Hailemariam Desalegn, ayaa mas’uuliyiinta labada kilil ee uu la kulmay u sheegay in ujeedka kulanka uu yahay mid ku qotoma xal u helida colaada dhiiga ku daatay ee u dhexeysa Soomaalida Ethiopia iyo Oromada.
Hailemariam Desalegn, waxa uu sheegay in meesha ay ka maqan tahay kaalinta Madaxweynayaasha, Odayaasha iyo Ganacsatada, waxa uuna ku baaqay in si shuruud la’aan ah loo hakiyo colaada weli jirta.
Hailemariam Desalegn, waxa uu Madaxweynayaasha labada kilil ku amray in si wada jira ay uga shaqeeyan nabad ka dhex dhalata labada dhinac iyo sidii dib loogu soo celin lahaa boqolaalka qoys ee colaada ka barakacay.
Ra’isul wasaare Hailemariam Desalegn waxa uu sidoo kale, madaxda diinta iyo odayaasha dhaqanka ugu baaqay inay garab istaagan labada kilil si dowladu usoo afjarto khilaafka udhaxeeya labada maamul.
Raysulwasaaruhu wuxuu sheegay in dowladu khilaafka taagan go’aano cad oo hordhac ah ka qaadatay kuwaas oo ay kamid yihiin:
1-In ciidamada labada dhinac laga saaro difaacyada ay kaga sugan yihiin goobaha ay ka taagan tahay colaada,
2-In goobahaasi la geeyo Booliska Federaalka si ay u qaboojiyaan colaada.
3-In ciidamada looga danbeeyo amniga wadooyinka isku xiran ee labada kilil.
4-In dowladu hub kadhigis ka bilaabi doonto deegaanada colaaduhu kajiraan.
5-In dowladu ay maamulan doonto kuwa ka danbeeyay dhiiga daatay si sharciga loo horgeeyo.
Ra’isul wasaare Hailemariam Desalegn, waxa uu Madaxweynayaasha kililada ku amray inay u hogaansamaan 5ta qodob ee uu soo saaray Hailemariam Desalegn.
Dhinaca kale, Madaxweynayaasha kililada iyo dhinacyada dhaqanka ayaa soo dhaweeyay dhaqan galinta qodobada uu soo saaray Hailemariam Desalegn.
© 2017 Nabadqaad.com - All rights reserved.